एक अन्तर्वार्तामा अभिनेत्री नम्रता सापकोटा र सोभिता सिंखडा खुबै खुलेर कुरा गरेका छन् ।
उनीहरुले ओशो तपोवनमा के–के हुन्छ भन्ने खुलाएका छन् । उनीहरु दुबै ओशो सन्यासी हुन् । तपोवनमा गएर ध्यानमा बस्छन् । सोभिता त पूर्ण रुपमा त्यही नै बस्छिन् ।
ओशो समुदाय के हो ? त्यहाँ के–के हुन्छ भन्ने कुरा अलिक बढी सोभिताले खुलाएकी छिन् । मानिसहरु ओशो ध्यान केन्द्र तपोवन जाँदा त्यहाँ कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सोभिता भन्छिन् जोपनि मेरो आनन्दका लागि मानिसहरु तपोवन जान्छन् ।
ओशोको फलोअर्स बन्छन् । त्यहाँ विभिन्न किसिमका कोठाहरु छन् । त्यहाँ बस्दा, खादा वा प्रयोग गरिएका विभिन्न सामानहरुको पैसा तपोवनमा तिर्नुपर्छ । पैसा नभएकाहरु जो ध्यानमा बस्न चाहानुहुन्छ उहाँहरुलाई निशुल्क गरिएको छ ।
सोभिता भन्छिन् । मानिसहरुको दिमाग पैसा, पद र यौ नमा छ । यदि यौ न फ्रि हुन्थ्यो भने पहिले नै सबै त्यहाँ पुग्थे
लग्जरी तरिकाले बस्न चाहानेहरुलाई स्टार होटलभन्दापनि राम्रो व्यवस्थापनि छ । त्यसपछि प्रस्तोताले ओशो तपोवनमा यौः न फ्रि छ भनिन्छ, अनेकौँ विवादहरु ल्याइएको छ वास्तविकता के हो ?
भनेर प्रश्न गर्छिन् । यसमा सोभिता भन्छिन् । मानिसहरुको दिमाग पैसा, पद र यौ नमा छ । यदि यौ न फ्रि हुन्थ्यो भने पहिले नै सबै त्यहाँ पुग्थे । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ यौ न फ्रि छैन ।
यदि ओशो आश्रममा फ्रि थियो भने मानिसजति जो कोहीपनि पुग्थे हो । तर ओशो गुरुले यौ नका बारमा खुलेर बोल्नुभएको छ । गास, बास, कपास जस्तै जरुरी छ यो विषयमा किन कुरा गरिन्न भनेर कुरा गर्नुभएको छ ।https://youtu.be/NwEVYlIsEt0
अभिनेत्री रविना टण्डनको अहिले सम्मकै ठुलो खुलासा , सुरुमा उनी स्टुडियोबाट बान्ता सफा गर्थिन्
भोजपुरी अभिनेत्री नम्रताको चोलीका अहिले सम्मकै बबाल बेली डान्स , चोलीको पिच्छेमा नम्रता अगाडी माधुरी पनि फेल
विवाहको ११ वर्षपछि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले तोडिन् मौनता , बताइन् सलमान र आफु बीचको सम्बन्धको वास्तविकता
पल शाह प्रकरणमा बोलिन नम्रता सापकोटा पनि, कसकाे पक्षका बाेलिन् ??